प्रधानमन्त्रीका लागि बालुवाटारमै भव्य महल बनाउँदै सरकार ! – सुदूरखबर डटकम
प्रधानमन्त्रीका लागि बालुवाटारमै भव्य महल बनाउँदै सरकार !
काठमाडौं, माघ २१ । सरकारले प्रधानमन्त्रीको निवासका लागि बालुवाटार परिसरमा भव्य महल बनाउने भएको छ । आर्थिक पारदर्शीता र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषित नीतिविपरीत सरकारले प्रधानमन्त्रीकका लागि महल बनाउन लागेको हो।
अहिलेको संरचना अपुग भएको निष्कर्षसहित सरकारले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न ‘प्रधानमन्त्री निवास’ बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिसमेत पाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै इच्छाबमोजिम बालुवाटारमा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि वालुवाटारस्थित हालको निवास परिसरको उपयुक्त स्थानमा आवश्यक सम्पूर्ण सेवासुविधायुक्त नयाँ भवन निर्माण गर्ने।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, मन्त्री, सांसदलगायत राज्यका बहालवाला पदाधिकारी सुविधाभोगी बन्दै गएको आरोप लागिरहेका बेला त्यसलाई थप बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीको सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्चेर नयाँ भवन बन्न लागेको हो।
गत भदौमा मात्रै सरकारले राष्ट्रपति भवन विस्तारका लागि महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिकै लागि प्रयोग हुनेगरी सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर इटालीबाट हेलिकप्टरसमेत खरिद गरिसकेको छ।
सरकाले उपराष्ट्रपति निवासका लागि लैनचौरमा रहेको समाजकल्याण परिषदको भवन खाली गराइरहेको छ। ३ वर्षअघि वालुवाटारमै मुख्यसचिवको समेत निवास निर्माण गर्ने चर्चा चले पनि अघि बढेको थिएन।
प्रधानमन्त्रीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा रहेका मुख्यसचिवका लागि २०७२ सालमा करिब ८ रोपनी क्षेत्रफलमा साढे २ तले भवन बनाउने भनिएको थियो।
“यसअघि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारभित्रै मूुयसचिवको निवास बनाउने कुरा भएको थियो र त्यसका लागिसमेत जग्गा रेखांकन र भवन निर्माणको न्युनतम लागत तयार पारिएको थियो,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, “तर, अहिले प्रधानमन्त्रीकै लागि अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न निवास बनाउने कुरा आएर नयाँ निर्णय गरिएको हो।”
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री बस्ने भवन बनाउनेबाहेक सरकारले भैंसेपाटीमा सांसद आवास गृह बनाउन १ सय ४९ रोपनी ४ आना जग्गा छुट्याइसकेको छ। काराेबार दैनिकमा खबर छ।